1 MPANJAKA 18.20-46	F.2 | Fitandremana Ankadifotsy
1 MPANJAKA 18.20-46	F.2
JEHOVAH NO ANDRIAMANITRA
Tsy mety ny misalasala. Ny heloky ny Zanak’Isiraely akory tsy hoe izy tsy nanompo an’i Jehovah intsony fa ilay izy sady nanompo an’i Jehovah no nanompo an’i Bala. Halan’Andriamanitra saro-piaro tanteraka izany satria efa nambarany hoe “Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany” (Eksodosy 20.3) . Mila misafidy hianareo hoy Elia na Jehovah na Bala (21).
Ny fandatsahana afo, porofon’izay tena Andriamanitra. Ny mpanompo sampy sasany dia nihevitra an’i Bala ho andriamanitra mpandatsa-baratra ka asa na izany no antony nifidianana’i Elia ity fisedrana amin’ny afo ity? Samy hametraka fanatitra eo ambony alitarany avy ny andaniny sy ankilany (23) ka hiantso ny andriamaniny ka izay mamaly amin’ny afo no ekena ho Andriamanitra (24). Niantso ny andriamaniny ary ireo mpaminanin’i Bala (26, 29a) kanjo tsy nahazo valiny mihitsy (29b). Rehefa niditra an-tsehatra kosa Elia, dia natsangany aloha ny alitaran’i Jehovah efa rava (30 ; jereo 19.10). Miseho ho mpanarina ny fivavahan’Isiraely efa mikorosofahana izy amin’izany. Ny fanondrahana rano ny kitay (34-35) dia entina hampibaribary ny tsy fisian’ny afo miafina. Raha vao niantso an’i Jehovah Elia (36-37), dia nilatsaka avy hatrany ny afo ka samy niaiky fa Jehovah no Andriamanitra (38-39) !
Fahafatesana no tambin’ny ota. Ireto mpaminanin’i Bala ireto dia niteraka ny fahatezeran’Andriamanitra ka voaheloka ho faty (40) ny karazan’olona toy izany (Deotoronomia 13.7-16). Raha vao voahilika ireto mpaminany sandoka ireto ka nivavaka Elia dia nilatsaka ny ranonorambe (44-45), fanomezana avy amin’Ilay Tompon’ny aina, satria ny rano dia midika aina.
Fanentanana : aza miandry afo milatsaka avy any an-danitra vao hino fa “sambatra…izay tsy nahita nefa nino” (Jaona 20.29)